Kulanka isdhexgalka Dhalin yaradda Gobolka Mudug oo Gaalkacyo ka Furmay – Puntland Voice
Kulanka isdhexgalka Dhalin yaradda Gobolka Mudug oo Gaalkacyo ka Furmay
July 25, 2018 7:09 am Views: 108
Kulan si heersare ah loosoo agaasomey, oo ku saabsanaa Wacyigalinta Bulshada ee Qaranimada Wadaniyadda iyo Walaaltinimada Umadda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay Hoolka Shirarka ee Hotel Uunlaaye ee magaalada Gaalkacyo.
Kulankaan ayaa waxaa soo qabanqaabisay isla markaana qabray Madasha Nabadda & Isdhexgalka Dhallinyarada Gobolka Mudug.
Kulankaana ayaa waxaa waxaa kasoo qayb galey dhammaan Bulshada reer Gaalkacyood Koonfurta iyo Waqooyiga qaybeheeda kala duwan sida,
Maamulada Galmudug iyo Puntland heer Gobol iyo heer dagmo., Culumaa’udiinka, Waxharadka, Odayaasha iyo Salaadiinta, Sagaakiisa Ciidamada isku dhafka ah iyo Maamulada, Odayaasha Nabadda, Ururada Dhallinyarada, Aqoonyahanka, Ururada Dhallinyarada, Ganacsatada, Bahda Xasaafadda iyo dhammaan Bulashada qaybeheeda kala duwan.
Kulankaan ayaa waxaa uu daba socday Tababar loo qabtay dhallinyaro Soomaaliyeed kasoo ku saabsanaa Wacyigalinta Dhallinyarada Qaranimada, Wadanniyadda iyo Walaaltinimada Umadda Soomaaliyeed kasoo ay qabatay Madasha Nabadda.
Kulanka Sama wade ayaa waxaa daba socday kulan ciyaareed kubadda Cagta ah oo ay ku wada ciyaareen Laba kooxood oo ka kala dhisan Labada maamul ee Gaalkacyo Puntland iyo Galmudug, oo iska qayb ka haa Barnaamijkaan Wactigalinta, Nabdda iyo Isdhexgalka Bulshada Gobolka.
Kulankaan oo ahaa kii ugu horreeyey ebid ee laga qabto Gobolka Mudud ayaa Ujeedadiisa guud waxay ahayd in Bulshada Soomaaliyeed lagu wacyi galiyo Wadaniyadda, Qaranimada iyo Walaaltinimada Ummadda Soomaliyeed, si loo hesho Nabad ku wada noolaasho iyo in dib loosoo celiyo Qarannimadii umadda Soomaaliyeed.
Barnaamijkaan Wacyigalinta Bulshada oo mudada usbuuc ah socotay oo ay qabatay Mashada Nabadda, ayaa waxaa Hirgalintiisa Gacan ka gaystey wadaniyiin Soomaaliyeed oo kala jooga Dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba.
Waxaan u mahadcelinaynaa Maaulada Gobolka Mudug, oo markasta nala garb taagan taageero iyo dhiiro galin nalana fududeeya shaqo kasta oo aan bulsha u qabanayno.